SOMALIDA REER ITOOBIYA WAA INAY DANAHOODA KA TASHADAAN HAL REER WADANKA UMA AF DUUMNANAYO | Faafan News
SOMALIDA REER ITOOBIYA WAA INAY DANAHOODA KA TASHADAAN HAL REER WADANKA UMA AF DUUMNANAYO
February 13, 2018 | Filed under: dhacdooyinka,WARARKA MAANTA | Posted by: admin
Faallo: Xaaladda Itoobiya iyo waraysigii taliyihii hore ee ciidanka Itiyoobiya :
Waxaad wada ogsoon tihiin in dalka Ethiopia uu ku jiro xaalad adag oo siyaasadeed , Shacabka dalka intiisa badana ay dalbanayaan, Xaquuqda tastuuriga ah ee dalka u yaal, Dowladuna ay ka dhaga adeegayso arintan.
Waxaa soo baxaya in ay dowlada itoobiya ay leedahay calaamadihii dowlad burburayso, oo ayna cidna cid kale ay is dhagaysanayn gaar ahaan xisbiga bahwadaagta EPRDF.
Waxaad moodaa waayadan danbe in xisbiyadii ku bahoobay EPRDF in midba midka kale iska ilaaninayo, oo aysan wax wada shaqeyn buuran aanu ka dhaxeyn , midkastaana aad moodo in uu gaar kiisa u tashanayo oo dowlad gobaleedyadii noqdeen kuwa kaba xoog badan dowladii dhexe sida soomaaliya, dowladii dhexena sii daciifayso,
Waxaan rabaa in aan qoraalkaygan aan soo qaato Jaraaidka (Reporter) ee uu leeyahay Amara oo ah nin xisbiga TPLF ahaan jiray oo ay is qabteen Ra’salawasaarihii hore Males Zenewi, ayaa arbacadii hore wuxuu waraystay nin hore u ahaan jiray Taliyihii hore Ciidamada Itoobiya General Tsadkan waraysigiisa ayaa sidan buu ahaa, lakiin ma soo wada qori karo turjumidiisa waxuu ku qornaa luqada ingriiska, lakiin muhiimada Ayaan soo koobi doonaa.
“wuxuu ku baaqay in la sameeyo gudi ka madax banaan EPRDF ee talada wadanka haya mudada labada sano ah ee ka hadhay doorashooyinka qaranka 2020.
Taliyahii hore ayaa tilmaamay in xaaladda siyaasadeed iyo Daruufaha ka jira wadanka uuna maarayn Karin xisbiga EPRDF, Sidda darted loo baahan yahay guddi madaxbanaan haddii la doonayo in xaaladu degto.
Dowladda ayaa dhawaan qaaday talaabooyin dhowr ah sida saamixida maxaabiista badan,magacaabid madaxda golaha doorashooyinka qarankaiyo shirar ay ururada ku bahoobay EPRDF oo dib loogu eegayo sida dalka loo hagayo.
Sidoo kale waxaa la dalac siiyay saraakiil ilaa lixdameeyo ah.iyo sadax ku xigeen oo loo sameeyay taliyaha ciidanka dalka.
Tsadkan ayaa sheegay in dowladu rabtay in ay ku qanciso shacbka, lakiin aysan ku filayn.
Sidaadarteed loo bahanyahay guddi madax banaan,waxaa kaluu ku daray in la abuuro xaalad asxaabta siyaasadeed ee dibada iyo gudahaba si nabad ah uga qayb qaadan karaan hanaan siyasadeed.
Ethiopia ayaa la tacaalaysa mudaaharaadyo rabshado wata iyo qulqulatooyin salka ku haya qoomiyadaha oo sababay khasaare badan iyo barakac xoog leh.
Ururka EPRDF ayaa balanqaad fara badan sameysay si wax looga qabto cabashooyinka garta ah ee dadweynuhu.
Taliyihii hore sheegay mudada labada sano ah in hay’adaha dowliga ay si caadi ah u shaqeeyaan, balse ururka EPRDF noqdo mid la siman xisbiyada kale ee tartanka ka qayb galaya ”.
Hadaba , maxaan ka fahmi karnaa hadalka taliyihii hore ee ciidanka Ethiopia Tsadikan hadaba aragtifaydu waa sidan ama fahankayga siyaasadeed.
1. In EPRDF lakala shakisanyahay ilaa hada oo nimankii TPLF awoodii lala qaybsaday oo ay noqdeen niman ka sii baxaya saxada siyaasada dalka oo culays ka haystaan kacdoonadii shacabka iyo ururada kale ee bahwadaagta la ah, isla markaana raadinayana garab kale oo aanan ahayn Axmaaro iyo Oromo, waana tan keentay in ONLF hada la raadiyo si ay soomaalidu garab ugu noqoto TPLF ta naflacaariga ah.
2. TPLF tu Waxay kaloo ka cabsanayaa in dalku ka dhaco dagaal sokeeye oo uu burburo dalku oo lagu kala yaaco oo iyaguna ay markaa la ugaarsado qowmiyad ahaan.
Hadaba soomaalidu maxaa la gudboon hada, talada deegaanka ama masiirka umadan iskama leh koox ama reero ee waa wax u wada yaal dadka deegaanka u dhashay oo ay u baahantahay in laga qayb galiyo oo aan loo dayn koox yar ama hal urur sida ONLF iyo kooxda Cabdi.
Waxaad ogsoontihiin aduunku uu ka jiro ama jirijiray ururo gobanimo u dagaalama sida PLO, ANC iyo SPLA
Oo gabi ahaantooda ay ahaa yeen kuwa matala shacabka deegaanadooda oo dhan sidaas ayayna inta badan ku guulaysteen waxa ay u dagaalamayeen, lakiin Ururka ONLF waa uu ka duwanyahay oo waa iska reero gaar ah loomana dhamo, aragti ahaana shacabka deegaanka oo dhan taageero ka ma haystaan,
Mana matali karaan qowmiyada Soomaalida Deegaanka oo dhan.
Hadaba waa in Dadka soomaaliyeed ay tashadaan oo aysan wax ka sugin labadan kooxood oo kaliya.
Waa in la furaa Madal siyaasadeed oo lagaga tashanayo Masiirka umadda oo aanan kolba koox la galin luuq.
Waxgaradka deegaanka in ay isku yimaadiin oo ay shirar joogta ah qabsadaan oo ay kolba kaga arinsanyaan sida ay xaaladu isku badasho.
Waa in dadka intiisa badan ee aamusan ee daawadayaasha qaaliga ah aysan sii aamus naanin oo ay ka soo baxaan dhufaysa aamusnida , tani waa masiirkii umada sida Tsadakan uga hadlayo masiirka dadkiisa aad uga hadashaan idinkuna oo aydaan aamusnaanin.
Hadii, aynu ka aamusno ogaada dalkan isbadal ayaa soo socda, masiirka umadana dad aanan aabo u ahayn ayaa ka talin meel fog na waa laga raadin doonaa.